हामी सबै मरणशील प्राणी हौँ, मृत्यु हाउगुजीको विषय होइन ! | Diyopost - ओझेलको खबर हामी सबै मरणशील प्राणी हौँ, मृत्यु हाउगुजीको विषय होइन ! | Diyopost - ओझेलको खबर
हामी सबै मरणशील प्राणी हौँ, मृत्यु हाउगुजीको विषय होइन !
दियो पोस्ट शुक्रबार, मंसिर ०३, २०७८ | १६:१६:३५
नुवाकोट, भिरकुनाका सन्तोष सरील आफ्नो पहिलो कवितासंग्रह ‘मृत्यु उत्सव’ लिएर आउँदैछन् । आफैँले पाँचदेखि १० कक्षासम्म पढेको श्री नवजीवन मा.वि.मा शिक्षक रहेका सरीलले करिब एक दशकदेखि शिक्षण पेसा अँगाल्दै आएका छन् ।
विज्ञान, कानुन, शिक्षा र जनप्रशासनको विद्यार्थी रहेका सरीलको लेखनको सुरुवात पाँच कक्षादेखि भएको हो । ‘शिक्षा’ शीर्षकमा लेखेको पहिलो कवितामार्फत उनी दोस्रो भएका थिए । विभिन्न संस्थाहरूले गरेको प्रतियोगितामा प्रथम एवं द्वितीय हुँदै आएका सरील दुई दशकदेखि साहित्य साधनारत छन् ।
प्रस्तुत छ, दियोपोस्टका लागि सन्तोष सरीलसँग राजु झल्लु प्रसादले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश;
पहिलो कविता कृति ‘मृत्यु उत्सव’को लागि तपाईँलाई बधाई । तर कविता नै किन ?
धन्यवाद । हामीकहाँ एउटा भनाइ बारबार सुनिन्छ, ‘कविता लेख। सुनाऊ । तर किताब निकालेर किन खर्च गर्छौ ? कसले पढ्छ र ?’ म उनीहरूलाई जवाफ दिन चाहन्थे । यसो भन्नु भनेको त ‘बिहे गर तर बच्चा जन्माउन पाउँदैनस् ‘भने जस्तो भएन र ? कविताको पाठक छैनन् भने बनाउने हो तर कवितासंग्रह निकाल्न हतोत्साहित गर्ने चाहिँ होइन । बिउ नरोप्दै रोप्ने हातलाई बाँध्न खोज्नेहरूका लागि जवाफ हो- ‘मृत्यु उत्सव ।’
मृत्यु उत्सव ठ्याक्कै के हो ?
कविता संग्रह हो । प्रेम / अध्यात्म / जीवन भोगाई / दुख / रहर एउटा नेपाली समाजको चित्रण।
कति कविता छन् ?
अहिले ५० भन्दा माथि छ, थोरै तलमाथि हुन सक्छ । केही लामा कविताहरू छन्, केही छोटा कविताहरू छन् ।
तपाईँका लागि कविता के हो ?
कुनै पनि सृजना सर्जकको दृष्टिकोण हो । जुन विषयमा म लेखिरहेको छु- त्यो विषयमा रहने मेरो दृष्टिकोण नै सृजना हो, यसलाई कविले कविता भन्ला, उपन्यासकार उपन्यास र चित्रकारले चित्र ।
तपाईँको लेखनको स्विचीङ प्रोसेस के हुन्छ, प्रेरणा कहाँदेखि आउँछ ?
हामी सामाजिक प्राणी हौँ, हामीले यही समाज देख्छौँ, भोग्छौँ । यसका स-साना कुराहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध स्थापित भइरहेको हुन्छ । यसक्रममा विभिन्न घटनाक्रमहरूसँग हाम्रो उठबस भइरहेको हुन्छ, कति घटनाले छुन्छ र लेखिन्छ । कतिले छोइहाल्दैन, लेखि हाल्न सकिन्न । र, अर्को कुरा- मलाई छुने घटनाले अर्को व्यक्तिलाई पनि छुन्छ या सम्बोधन गर्छ कि जस्तो लाग्छ । मलाई जे कुराले छोएको छ, अरूलाई पनि छुन सक्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्छु । र, लेखन भन्ने कुरा- ऊर्जा रहेछ, आयो लेखिहाल्छु । आएन थन्किरहन्छु ।
शीर्षकबारे सोध्न मन लाग्यो, ‘मृत्यु उत्सव’ कसरी ? ‘जन्म उत्सव’ मनाउने परिपाटीमा तपाईँ ‘मृत्यु उत्सव’ लिएर आइरहनु भएको छ ?
मृत्यु भन्नासाथ हामी डराउने गर्दछौँ । हामी भौतिकवाद (संसार)मा नै रुमल्लिइरहेका मृत्यु डरको विषय हो । जीवनप्रतिको लोभ, लालसा र आशक्तिले हामीलाई तानिरहेको छ । यिनै कारण हामी मृत्युदेखि पर भागिरहेका छौँ । तर, मृत्यु एउटा मुक्ति हो, स्वतन्त्रता हो । मृत्यु हाउगुजीको विषय होइन भन्ने मलाई लाग्छ । जीवनलाई सहजतासाथ ग्रहण गरेजस्तै मृत्युलाई पनि सहजतासाथ ग्रहण गर्न सकिन्छ, किनकि अन्ततोगत्वा त्यो हुनु नै छ । हामी सबै मरणशील प्राणी नै हौँ ।
सङ्ग्रहमा आध्यात्मिक या मृत्यु चिन्तनसँग सम्बन्धित कविताहरू मात्रै हुन् ?
होइन, सामाजिक अवयवहरूलाई खोतल्ने प्रयास गरेको छु । देश, प्रकृति, प्रेम, व्यङ्ग्य, सामाजिक रीतिस्थितिबारे कविताहरू लेखेको छु ।
नयाँ पुस्तालाई लिएर अग्रज पुस्ता, पब्लिकेसन एवं मिडियाको व्यवहार कस्तो पाउनुहुन्छ ?
नयाँका सृजना स्थापितको बराबर भए सुनमा सुगन्ध भयो तर नयाँ अनुहार र पुराना अनुहारलाई एउटै पावरको चस्माले हेरिनु हुँदैन। हामीकहाँ यो प्रयास भइरहेको छ, जुन नोक्सानदायक छ । अर्को पाटो चाहिँ, मिडियाले/पब्लिकेसनले पुराना र स्थापितलाई मात्र धेरै महत्त्व दिइरहेका छन् । नयाँ भन्ने बित्तिकै उनीहरूको व्यवहार नै फरक पाइरहेको छु । त्यसो गर्न नहुने हो किनभने भोलि रुख हुने त त्यही बिरुवाहरू नै हुन् ।
‘लेख्नका लागि पढ्नुपर्छ’ या ‘पढ्नेले लेख्छन्’ भन्ने गरिन्छ । अझ, ‘लेखन भनेको अध्ययनको सहउत्पादन हो’ भन्ने भाष्य छ । तपाईँको मत ? तपाईँ किन लेख्नुहुन्छ ? तपाईँ किन पढ्नुहुन्छ ?
लेख्नेले पढ्नुपर्छ। त्यो पनि फरक फरक विधा । मलाई लाग्छ, अध्ययनले हाम्रो सोचाइको आयतन बढाइदिन्छ। म त अझ चलचित्र पनि हेर्ने सुझाव दिन चाहन्छु। एउटा पूर्ण सृजनाले सन्तुष्टि दिन्छु । मैले अघि पनि भनिसकेको छु कि मैले घटनालाई कसरी लिन्छु , त्यही आधारमा शब्दहरू बुन्छु । लेख्नु र पढ्नु ध्यानमा बस्नु जस्तै हो मेरो लागि ।
आज कविता लेखिरहेकाहरू ज्यादा अराजक एवं अप्रसांगिक छन् भनिन्छ, समकालीन पुस्ता साहित्यको नाममा ‘हतारको लतपत’ लेखिरहेको छ भन्ने छ नि ?
तत्कालका लागि कसैलाई पनि सामाजिक सञ्जालले भयङ्कर बनाइदिन्छ। त्यो कविता होस् या अन्य विधा । आजका मानिसलाई हतारो त छ नै तर हिलोबिच कमलको फूल पनि फुलिरहेका छन् ।
अग्रज कविहरूको दाँजोमा हामीकहाँ छौँ ? समकालीन पुस्ता के लेख्दै छ ? के लेख्न छुटाइरहेको छ ?
फरक समयबिच तुलना गर्नु त्यति उपयुक्त ठान्दिन म । लेखनीलाई लेखकको सोच, हुर्केको वातावरण साथै व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक अवस्था जस्ता कुराले पनि फरक पार्छ । अनि पाठकको चेतनाको स्तरले पनि प्रभाव पार्छ कि! एकाध बाहेक अहिलेको पुस्ता क्षणिकको वाहवाही बटुल्ने ध्याउन्नमा लेखिरहे जस्तो लाग्छ । समकालीन पुस्ता बोक्राहरूको बयानमा भुलिरहेजस्तो पनि लाग्छ । हरेक विषयको गुदी चाख्न र चखाउन सकेका छैनन् । र, म पनि राम्रोकै कोसिसमा लागिरहेको नै छु ।
तपाईँका प्रिय पाँच कवितासंग्रहहरू ?
यो साह्रै गाह्रो प्रश्न भयो । सबैका सबै सृजनाको आफ्नै विशेषता रहन्छ । मन त सबै नै पर्छन् । तर केही पढिरहन मन लाग्ने पुस्तकहरूमा :
१. यो जिन्दगी खै! के जिन्दगी
२. घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे
३. आमाको सपना
५. सगरमाथाको गहिराई ।
आख्यान र गैर आख्यानतर्फ चाहिँ ?
पढेका मध्ये राम्रा लागेका आख्यानहरूमध्ये;
१. पागल बस्ती
२. चपाइएका अनुहारहरू
३. सेतो बाघ
५. शिरीषको फूल ।
१. वेदमा के छ?
४. विचार विज्ञान
५. सिकाउने शैली ।
पछिल्ला किताबहरूलाई केवल ‘लेखकको एकाङ्गी अनुभूतिमा सीमित भएको’ आरोप लागिरहेको छ । तपाईँको मत ?
अचेल बजार हल्लामा चल्छ। तर हल्लाले एकपटक मात्र काम गर्छ। अनि कुनै एउटा पुस्तक चलेपछि त्यस्तै लेख्दा चल्दो रहेछ कि भन्ने सोच पनि हाबी भएको हो कि जस्तो लाग्छ।
मैले त सक्काएँ, तपाईँको पो केही प्रश्नहरू छन् कि ?
आफ्ना कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा धन्यवाद । यहाँ चलेकालाई मात्र स्थान दिन खोज्छन् । बामे सर्दै गरेकोलाई महत्त्व दिनुभयो ,आभारी छु।
-प्रस्तुत छ, सन्तोष सरीलका तीन कविताहरू :
(१). मक्किएको मगज
शुद्ध लेखिएको प्याकेटको दूध
ताजा लेखिएको पाउरोटी
पसलेले तोकेको मूल्य
दुःखको दुई गाँस
छिमेकी दम्पती को भनाभन
अफिस नपुगुन्जेल नेपथ्य मगजमा मच्चिरहन्छ।
छिटो आइपुगेका इमानदार फाइलहरू
टेबलमा टास्सिरहन्छन् ।
ढिलो आइपुगेका छट्टु फाइलहरू
कोठा कोठामा वेगमा बत्तिन्छ ।
एक कुटिल मुस्कान..
एक कन्सिरी कनाई…
हाकिमको बदलिएको वडि ल्याङ्ग्वेज-
घर नपुगुन्जेल मगजमा मच्चिरहन्छ।
डिजिटल अखबारका आँखा का दृश्य
सत्य त एउटै हुनुपर्ने
रगत जस्तै सबैका लागि रातो।
अखबार भन्दा एउटै खबरको रूप धेरै।
छिनछिनमा बदलिरहने कस्तो जिब्रो
नेता – नेता भन्दा केही बढी अभिनेता लाग्छ
कसरी जानेको होला रङ फेर्न?
कसरी सकेको होला इमान बेच्न?
कसरी बनेका होलान् , कामै नगरी सम्पन्न?
भोकको हत्या नगरुन्जेल अदृश्य – दृश्य मगजमा मच्चिरहन्छ।
बिस्तारामा आराम गर्न खोज्दा
हजारौँ बिरामहरुले सम्झन्छन् –
भित्रभित्रै जीर्ण भएर पनि
परिवारलाई पूर्ण खुसी दिनुछ।
एउटा विश्वासको थुङ्गो
शहीदलाई समर्पण गर्नुछ।
ननिदाउन्जेल आँखा मा आमा मुस्कुराउँछिन्।
सुन न .. मायाको बगैँचा ।
फक्रिएको तिम्रो जवानी
तिम्रो रङ्गीचङ्गी प्रेमले
यो मन चङ्गा बनाएको छ।
धागो जसरी चुँडिएर
धड्कन मुटुको लट्टाइबाट
तिम्रै धड्कन बनूँ भन्छ
उडेर तिमीतिरै आऊ भन्छ
तिम्रै अङ्गालोमा अल्झिरहन खोज्छ ।
तिम्रै प्रेमको सुवास
फोक्सो भरिएको छ ।
मेरो मखमली प्रेम आजन्म फुलिरहनेछ
तिम्रै नाममा ।
जसरी फुलिरहेछ हारम को रुखमा
हरेक नयाँ वर्षमा एउटा मङलसुत्र
किन इन्कार गर्छौ ?
शताब्दी देखि को
प्रेम स्वीकार गर्न
म तिम्रै सहलेश हु।
हरेक धैर्यताको अन्त्यपछि
फेरि अर्को धैर्यता फुलाउनेछु।
कति शताब्दी कुर्नु पर्छ ?
चौरासी व्यञ्जन को अघि छु
तर भोको छु।
भातका सितामा गरिबिको चिप्रा देख्छु।
मासुका हड्डीहरू- अभावको कङ्काल लाग्छ
चटनीमा चोटहरूको भूगोल पाउँछु
सब्जीमा निरीह भई सपनाहरू गलिरहन्छन्
सलादका टुक्राहरूमा टुक्रिन्छन्-
परिकारहरूबाट परिबन्धमा परेका
प्रेतात्माहरूको आर्तनाद बाफ बनेर उड्छन्।
बाच्नका लागि खानु र बचाएर खानु
बढी खाएर मर्नु र खान नपाएर मर्नु
उस्तै सुनिन्छ तर कति फरक छ-
अघाएको डकार र रित्तो पेटको हुङ्कार
तिमिलाई थाहा छ-
संसारको शक्तिशाली हतियार भोको पेट हो ।
शुक्रबार, मंसिर ०३, २०७८ | १६:१६:३५